Achawlaymyar - Page 667 of 790 - News and Media
August 21, 2020 by Achawlaymyar
တရားကို တေးဆို ၊ အဖေကိုသားကဆဲ ဆွေမျိုးထဲက ဓါးပြတိုက် ၊ မိုက်လျှင်သောတာပန် မကောင်းကြံလျှင် သမာဓိ ၊ရွှေရှိမှ လူလိမ္မာ လိမ်နိုင်မှ သစ္စာရှင် ၊ပညာရှင်ကို ပယ်၍ထား အချစ်ဆုံးက သစ္စာပျက် ၊ရိုးသားသူကို အရူးဆို အပျိုငယ်က လင်နေစော ၊အင်္ကျီပါးနဲ့ ဥပုသ်သည်ဇရပ်အလယ် ကို့ယို့ကားယား ၊အမျိုးသမီးကောင်းက ပိုက်ဆံရှာ အပျိုမဖြစ်ခင်က ရည်းစားထား ၊ဆင်းရဲသားက သူဌေးယောင်ဆောင် အဝတ်ပြောင်မှ လူရိုသေ ၊လင်ရှိမယားက အပျိုလုပ် မသာပို့ရင်း အပျိုလှည့် ၊အလှူပေးရင်း ထမင်းရောင်း ဆယ်နှစ်သမီးက အိမ်ထောင်ကျ ၊ဆယ်အိမ်ခေါင်းက စိတ်ကြီးဝင် ပွဲသဘင်ပါမှ အလှူဖြစ် ၊စာမတတ်သူက တရားပြ ဇာတ်သမားမှ လူခေါ်ချင် ၊သူတော်စင်ကို ပယ်၍ထား ကြွေးပေးသူက ကျွန်နဲ့တူ ၊ကြွေးယူသူက သခင်ဖြစ် … Read more
ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီး အသိပေးလာတဲ့ ကမ္ဘာမှာကူးစက်မှု အလွန်မြန်ဆန်တဲ့ ကိုဗစ်ပိုး သန္ဓေပြောင်း D614G
ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီး အသိပေးလာတဲ့ ကမ္ဘာမှာကူးစက်မှု အလွန်မြန်ဆန်တဲ့ ကိုဗစ်ပိုး သန္ဓေပြောင်း D614G ကမ္ဘာမှာ ကူးစက် မှု အ လွန် မြန်ဆ န်တဲ့ ကိုဗ စ်ပိုး သန္ဓေပြောင်း D614G မြန်မာနို င်ငံမှာ ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးလို က် တဲ့ ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီး 9:57 am, 20-8-2020 ဒီနေ့မ နက် အတွက် ထပ်မံစစ်ဆေး ၆၅၉ ဦးဖြစ်ပါတယ် ပိုးတွေ့လူနာသစ် ၂ ဦး ရှိပါတယ်ဒီနှစ်ဦးလုံးဟာ စစ်တွေကဖြစ်ပါတယ် ….အခုဆို စစ်တွေက ၆ ယောက်ရှိနေပါပြီတစ်ယောက်က ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ် …။ သူကတော့ Q ထားတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ….ဒါ့ကြောင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ အထူးသတိပြုကြဖို့ အသိပေးလိုပါတယ် … Read more
တံမြက်စည်းကြမ်းလေး တချောင်းက ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာ
တစ်ခါတုန်းက တံမြက်စည်းသည်ကြီးက တံမြက်စည်းနှစ်ချောင်းကို ရောင်းချခဲ့တယ်။ ဝယ်တဲ့သူက တစ်ချောင်းကို အိမ်ပေါ်မှာလှည်းဖို့နဲ့ တစ်ချောင်းက မြေကြီးမှာ လှည်းဖို့ဆိုပြီး ဝယ်ခဲ့တာပေါ့။ မြေကြီးမှာ အလှည်းခံရတဲ့ တံမြက်စည်းက နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဖှုန်တွေနဲ့လုံးပန်း ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေနဲ့ထိရ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ကျောက်စရစ်တွေနဲ့လဲ ကြုံရဆုံရတော့ သူ့ဘဝဟာ ကြမ်းသထက် ကြမ်းလာတယ်တဲ့။ ဒီဟာကိုကြည့်ပြီး သူ့ဘဝသူ အားငယ်တတ်လာတယ်။ အိမ်ပေါ်မှာ နေရတဲ့ တံမြက်စည်းလေးဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာ သူ့ဘဝကျတော့ နေလဲမပူ ကြမ်းတဲ့ကျောက်စရစ်တွေနဲ့မတွေ့ရ ကျင်ကြီးကျင်ငယ်နဲ့မဆုံနဲ့.. သူ့ဘဝသာယာနေမှာ ဘဲဆိုပြီး သူ့မိတ်ဆွေ အိမ်ပေါ်လှည်းခံရတဲ့ တံမြက်စည်းကို အားကျနေတယ်တဲ့။ နောက်ပြီး သူကအိမ်ပေါ်မှာနေရတော့ သူက သင်းပျံ့တဲ့ရနံ့တွေနဲ့နေရမှာပဲ ငါလိုဘဝမကြမ်းလောက်ဘူး ငါလဲသူ့လို ဘဝရောက်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီး….အမြဲတွေးပြီးနေတတ်တယ်တဲ့။ ဒါနဲ့တစ်နေ့ သူ့သူငယ်ချင်းတံမြက်စည်းကို လှေခါးနားမှာ ဆုံမိကြတယ်တဲ့။ စကားပြောဖြစ်ကြတယ်ပေါ့။ အိမ်အောက်မြေကြီးမှာအလှည်းခံရတဲ့ တံမြက်စည်းက … Read more
ရက်စက်သွားတဲ့ ချစ်သူကို လှလှပပ လက်စားချေနည်း (၅)မျိုး …….
ဘဝမှာ ကိုယ့်အပေါ်ကို ထင်မှတ်မထားလောက်အောင် ရက်စက်သွားတဲ့ သူတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်ကို နာကျင်မှုတွေပေးပြီး ရက်စက်သွားတဲ့သူကို လက်စားချေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် (၁) အရင်ထက်ပိုလှအောင်နေပါ သင်အရင်က လှသည်ဖြစ်စေ၊ မလှသည်ဖြစ်စေ၊ ဒီအချိန်မှာတော့ အလှဆုံးဖြစ်အောင်နေပါ။ သူ့လက်ထဲမှာရှိတုန်းက ကျောက်တုံးလို့ထင်ပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့ အရာဟာ စိန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို သိသွားအောင် လုပ်ပြလိုက်ပါ။ သင့်ရဲ့ အလှကိုမြင်ပြီး တသသ ပြန်လိုချင်ပေမယ့် ချဉ်းကပ်ရဲမှာမဟုတ်တဲ့ အတွက် သူ့ရင်ထဲ ကလိကလိဖြစ်နေမှာပါ။ (၂) ရောက်နေတဲ့အခြေအနေမှာပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပါ သင်ဟာကျောင်းတက်နေတာဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ဖြစ် လုပ်နေတဲ့အလုပ်၊ ရောက်နေတဲ့နေရာမှာ ပိုကောင်းအောင် ကြိုးစားပါ။ သူထားခဲ့လည်း သင့်ဘဝကဘာမှမဖြစ်တဲ့အပြင် ပိုလို့တောင် ကောင်းသွားသေးတယ် ဆိုတာကို လက်တွေ့ပြလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် သင့်ကို ထားခဲ့ပေမယ့် သင့်အပေါ်မှာ လုံးဝအထင်အမြင်သေးရဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ (၃) သူ့အရှေ့မှာမပြိုလဲပါနဲ့ … Read more
မန္တလေးမှာ စစ်တွေက ရောက်နှင့်ပြီးသား ရောဂါရှိသူတွေ ရှိနေနိုင်လို မန်းမြို့တော်ဝန် သတိပေး
မန္တလေးမှာ စစ်တွေက ရောက်နှင့်ပြီးသား ရောဂါရှိသူတွေ ရှိနေနိုင်လို မန်းမြို့တော်ဝန် သတိပေး မန္တလေးမှာ စစ်တွေက ရောက်နှင့်ပြီးသား ရောဂါရှိသူတွေ ရှိနေနိုင်လို့ တက်နိုင်သလောက် အပြင်မထွက်ရန် မန်းမြို့တော်ဝန် သတိပေး ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် ပြည်တွင်းကူးစက်မှုများ ပိုတွေ့လာရကြောင်း၊ စစ်တွေသည် မန္တလေးနှင့်ဝေးသည်ဟုမတွေးစေချင်ဘဲ ယာဉ်လိုင်းများမှတစ်နေ့လျှင်- ခရီးသည် ၈၀ ကျော်ဝင်ရောက်နေကြောင်း၊ မန်းမြို့တော်ဝန် ဒေါက်တာရဲလွင်ကက လူမှုကွန်ရက်ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် သတိပေးရေးသားသည်။ “စစ်တွေဘက်ကလာသူတွေ quarantine လုပ်နေသလို ယာဉ်လိုင်းတွေ ပိတ်သွားပေမယ့် ရောက်နှင့်နေတဲ့ ရောဂါရှိနေသူ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက် ရှိမယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်ပါ။”ဟု မြို့တော်ဝန်က ​ သတိပေးသည်။ မန္တလေးမြို့တွင် အပြင်ထွက်ကြသူများအနက် ၅% လောက်သာ mask တပ်သည်ကို တွေ့ရပြီး ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု အရမ်းမြန်နိုင်သည့် အခြေအနေ ရှိနေကြောင်း … Read more
ခု တလော အရမျးနာမညျကွီးနတေဲ့ ၃၆နာရီအစာဖွတျခွငျး အကြိုးကြေးဇူးမြာ
လှနျခဲ့သော နှဈပေါငျးခွောကျထောငျလောကျက ကမ်ဘာပျေါမှာ အသိပညာရှငျတှေ အမြားကွီးရှိခဲ့တဲ့သမိုငျးအထောကျအထားတှရှေိခဲ့ပါတယျ။ အဲ့တုနျးက နာရီရှညျအစာဖွတျတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပွီးလူတှေ ကနျြးမာအသကျရှညျခဲ့ကွတယျလို့ သိရပါတယျ။အခုလညျးအဲဒီနညျးကို ကနြျောတို့ လုပျလို့ရပါတယျ။ လုပျသငျ့တဲ့၃၆နာရီfastingနညျးလမျးကို ပွောပွသှားပါမယျ။လူတိုငျးလညျး အလှယျတကူ လုပျနိုငျကွပါတယျ။ ၃၆နာရီ fastingလုပျဖို့ ပိတျရကျတှကေိုရှေးခယျြတာ ကောငျးတယျ။ဒါကွောငျ့ သောကွာနညေ့က စလိုကျမယျ။သောကွာနညေ့၇နာရီမှာ ညစာစားပွီးတာနဲ့၃၆နာရီတိတိ ဘာအစာမှ မစားရဘဲ ရတေဈမြိုးထဲသာ သောကျဖို့ဖွဈပါတယျ။ မညျသညျ့ကယျလိုရီမှ မထညျ့ရတော့ပါဘူး။အခြိုရညျတောငျ မသောကျရပါဘူး။ zero calorie အတိုငျး ထားရမှာဖွဈပါတယျ။သောကွာည၇နာရီမှစတငျပွီး တနင်ျဂနှေ မနကျ၇နာရီအထိ ဖွဈပါတယျ။ ရကေိုကွိုကျသလောကျ သောကျနိုငျတယျ။ ကွိုကျသလောကျ အိပျနိုငျတယျ။ အဲဒီအစာဖွတျလကေ့ငျြ့ခနျးကနေ ရရှိလာမယျ့ကနျြးမာရေး အကြိုးကြေးဇူးတှကေတော့ အမြားကွီးဖွဈပါတယျ။ အစာဖွတျလိုကျတော့Bodyကenergyရဖို့အတှကျ ကိုယျတှငျးမှာအာဟာရတှကေို လိုကျရှာပါတယျ။ အာဟာရကိုမတှတေ့ော့ ကိုယျတှငျးကအဆီတှကေို လိုကျစားပါတယျ။အဆီတှထေဲမှာ အောငျးနတေဲ့အဆိပျတှဟော လောငျကြှမျးခံရတဲ့အတှကျ အဆီလညျးကပြွီးအဆိပျတှလေညျး ဖယျရှားခံရပါတယျ။ … Read more
ဖူးစာရှင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြားဖူးကြမှာပါ သင့် ဖူးစာရှင်ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ ….
ဖူးစာရှင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာရှင်နဲ့ ဘယ်နေရာ ဘယ်အချိန်မှာ တွေ့မလဲဆိုတာကို ဘယ်လိုမှ မှန်းလို့မရပါဘူး။ ဒါပင်မဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာရှင်လို့ ထင်သောသူက ကိုယ်နဲ့တူညီချက်တွေကတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုတူညီချက်လဲ ဆိုရင်တော့ အောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။ ၁. လက်ချောင်းလေးတွေက တူနေတယ်။ သူကိုတွေ့တဲ့နေ့မှာ ဘာရယ်လို့မဟုတ်ဘူး သူ့ရဲ့လက်ချောင်းလေးကို ကြည့်လိုက်သောအခါ ကိုယ့်ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ တော်တော်တူနေတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေက ပုံစံကနည်းနည်း ထူးဆန်းနေတာကြောင့် တူတဲ့သူက ရှားပါတယ်။ လက်ချောင်းတင်မက လက်သည်းလေးတွေလည်း တူနေတာပါ။ ၂. စိတ်ထဲကနေရာချင်းလဲ တူနေတယ်။ သူနဲ့စကားပြောနေတဲ့အခါ ဘာရယ်လို့မဟုတ် ငယ်ငယ်တုန်းက သွားခဲ့တဲ့နေရာထဲက အကြိုက်ဆုံးနေရာလေးတွေလည်း တူနေတယ်။ သူနဲ့ ကြီးပြင်းတဲ့နေရာက မတူပင်မဲ့ အကြိုက်ဆုံးနေရာလေးတွေက တူတူပဲ ဖြစ်နေတာဟာ တော်တော် ထူးဆန်းပါတယ်။ ၃. တွေ့တွေ့ချင်း … Read more
AYA Bank ATMစက် ဖောက်ထွင်းခံရ
AYA Bank ATMစက် ဖောက်ထွင်းခံရ ဒဂုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ AYA Bank ATMစက် ဖောက်ထွင်းခံရ ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၂၁။ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ AYA Bank ရဲ့ ATM စက်တစ်လုံး ဖောက်ထွင်းခံရမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ရပ်ကွက်နေပြည်သူအချို့ရဲ့ ပြောဆိုချက်များအရ သိရပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာ ယနေ့ ဩဂုတ်လ ၂၁ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းအချိန်က ဒဂုံမြို့နယ်၊ ယောမင်းကြီးရပ်ကွက်အတွင်းရှိ န ဝဒေးလမ်းမှCity Express ဆိုင်ရှေ့ရှိ AYA Bank ရဲ့ ATM စက် ဖောက်ထွင်းခံရတာကို တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “မနက်ကတွေ့တာပါ၊ City Express ဆိုင်ရှေ့က AYA ATM စက်ဖောက်ခံရတာ၊ သူက စီစီတီဗီကို အုပ်ပီး လုပ်သွားတာပါ”လို့ ရပ်ကွက်နေပြည်သူတစ်ဦးက … Read more
အရင်ထက် ၁၀ ဆ ကူးစက်မြန်တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး မြန်မာတွင် တွေ့ရှိ
အရင်ထက် ၁၀ ဆ ကူးစက်မြန်တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး မြန်မာတွင် တွေ့ရှိ အရင်ထက် ၁၀ ဆ ကူးစက်မြန်တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ တွေ့နေရပြီဖြစ်လို့ ပြည်သူတွေ အထူးသတိထားဖို့ လိုတယ်လို့ ဆေးသုတေသနဦးစီး တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ စတင်ဖြစ်တုန်းက D614 မျိုးဗီဇ ကူးစက်တာဖြစ်ခဲ့ပြီး မေ ၇ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစလို့ G614 မျိုးဗီဇ ကူးစက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ ဒီနေ့ ဆေးသုတေသနဦးစီးမှာ လုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုတာပါ။ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်က “D614 ကနေ G614 မျိုးဗီဇပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင် ရောဂါကူးစက်စေနိုင်မှုက ဆယ်ဆအထိ ပိုများပြားစေပါတယ်။ G614 အမျိုးအစားအဖြစ် ပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုရင် ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်း ဖြစ်နိုင်ချေပိုများစေတယ်။ ကူးစက်မှုမြင့်မားနေတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ G614 … Read more
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ဝါတွင်းကာလ နီးလာပြီဖြစ်လို့ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် လှူဒါန်းလျင် ရရှိနိုင်သည့် ကောင်းကျိုးတွေကို ရေးသား၍ ဓမ္မဒါနပြုလိုက်ပါတယ်….. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် ဝါတွင်းအခါ ကာလမှာ နီးစပ်ရာ သံဃာတော်များသီတင်းသုံးရာကျောင်းတိုက်တို့မှာ အဖွဲ့အစည်းဖြင့်လည်းကောင်း၊မိသားစု ဖြင့်လည်းကောင်း၊တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲသော် လည်းကောင်း….. ကျောင်းတိုက်ရှိ သံဃာတော်များအား ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူဒါန်းလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ထိုသို့ သံဃာတော် များအား မိမိတို့၏ ချွေးနည်းစာဖြင့် ဝါဆိုသင်္ကန်းများ ကပ်လှူဒါန်သည့်အခါ……. ထိုအလှူကို အကြောင်းပြု၍ ကောင်းကျိုးတွေ ဘယ်လောက်ရသလဲ ဆိုတာသိရင် မိမိတို့၏ အလှူဒါနအပေါ်မှာ ပိုပြီး တော့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်…..ပို၍လည်း အကျိုးပေးထက် သန်ပါတယ်။ ဒါမို့ကြောင့် ဝါဆို သင်္ကန်းပေး လှူဒါန်းရသဖြင့် မိမိတို့ရရှိနိုင်သည့် ကောင်းကျိုးတရား များကို တစ်ခုချင်းစီ သိထားသင့် ပါတယ်…… သံဃာတော်တို့အား ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် … Read more
← Previous Page1 … Page666 Page667 Page668 … Page790 Next →